Midowga Yurub oo soo dhaweeyay wadahadallada Dowladda Federaalka iyo Somaliland - Tilmaan Media
Midowga Yurub oo tillaabo muhiim ah ku sheegay Dib-u-soo-nooleynta wada-hadalkii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Somaliland.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in horey loo qaaday geedi socodkii caadiga ahaa ee xiriirkooda, taas oo keenaysa rajo soo cusbooneysiisa oo keliya maaha dadka Soomaaliya iyo Somaliland laakiin geeska Afrika oo dhan.
“Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah tallaabooyinka lagu dhisayo kalsoonida si loo heshiiyo khilaafaadka loona horumariyo nabad-dhisidda, barwaaqada iyo horumarka gobolka. Jabuuti iyo Itoobiya waxay door libaax leh ka ciyaareen sidii wadahadalkani u dhici lahaa,” ayaa lagu yidhi bayaanka.
Midowga yurub, oo goobjooge ka ah wadahadalada, Ayaa sheegay inuusan la hari doonin wax dadaal ah oo lagu taageerayo howsha.
Wuxuu sheegay sii wadista wadahadaladaas iyada oo aan la carqaladeyn ayaa ah dariiqa kaliya ee loo heli karo nabad waarta, barwaaqo iyo amni.